Caafimaadka iyo Sayniska | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 41
Nolosha aadanaha ma ahan nolol loo wada simanyahay, maxaa yeellay waxaan ku wada noolnahay adduun la kalla sareeyo, balse waxaa isweydiin mudan maxaa keenay kalla sareynta dunidda? Bulshada caalamka ku nool waa in lawada ogadaa kalla sareynta ma timaado waqti kooban balse waa wax bini’aadamka sameystaan. Aadanaha inay ku wada noolaan qaab oo ay u kalla sareeyaan waa wax Illahay SCW u sameeyay dunidda. Waxaa ku jiro xikmad aad u weyn. In aadanaha kalle sareeyo waa wax soo jireen ah balse su’aasha meesha taalay ayaa ahayd bal maxaa keenay in maanta aadanaha Illahay SCW qalkay ay u kalla sareeyaan? Dadku …
Qisadii Malik Ibn Dinar Magaaladu waa Medina, meeshuna waa Masaajidka Nabiga Naxariis iyo nabad galyo korkiisa ha ahaato, waa xalaqad diinta lagu barto oo ay fadhiyaan arday aad u fara badani. Ardaydu waxa ay sugayaan sheekhoodii. Sheekhu maanta waa uu soo habsaamay, ardayduna waxa ay ka walwalsan yihiin soo daahida sheekhooda. Waxoogaay markii ay sugayeen ayuu sheekhii yimid isaga oo ay ka muuqato haybadii iyo karaamadii culimada saalixiinta ah lagu yiqiinay. Meeshii loogu talagalay ayuu fadhiisatay, salaan ka dibna wuxuu bilaabay hadalkiisii. Wuxuu yidhi “walaalayaal in badan ayaan masaajidkan idiinku dhigayay qaybaha kala duwan ee culuumta Islaamka. Maantase waxa aan …
Aqoonta waa awooda koowaad oo ku fahansiiso muhiimada aad u nooshahay iyo waxa adiga muhiim kuu ah. Hadaba ogaaw waxaad barato waa wax adiga muhiim kuu ah kuna anfici doona. Ku bixi waqtigaaga dadka wanaagsan oo ku dayashada mudan, si aad u hesho caqli nadiif ah oo aad kaga guuleysato nolosha caajiska badan. Nolosha caajiska badan waa horseedaha bur-buriyaha qalbiga haddii taasi dhacdana waxaa gebi ahaanba bur-buray noloshaada oo idil. Waqti horre go`aan qaado, go’aan qaadashada ma ahan wax dhib yar mana ahan wax markiiba lagu deg-dego. Maah-maah Soomaaliyeed ayaa ah “deg-degsiimo door ma dhasho” marka waxaa loo baahan …
Waxay aheyd galab saacadu ay ku aadantahay sagaalkii ama 3-dii galabnimo hadba sidda aad u taqaano. Waxaa wal-wal wada haayay dhammaan ardayda Jaamacada ayagoo markaas ay ka murugeysanyihiin natiijada imtixaanka taas oo qaadhkood soo qaateen natiijadooda. Waxaa jiray guux iyo sawaxan ka dhax dhacaayay ardayda dhexdooda waxey is weydiinaayeen su’aallo dhowr ah waxey ahaayeen kuwada sheekeynaayeen imtixaanka iyo dabeecadda qaar. Midkii daraja yar haaysta waxuu eeedeynaayay macalimiinta assagoo ku eedeynaayay ineey qabyaallad ahaan u saxeen imtixaanka. Midkii dadaalay oo daraja fiican helayna lagu xumanaayay inuu yahay mid macalin hebal cidiisa ah taasi waxaaa ka darneed markaan soo fariistay geed …
“ Qoraalku waa shaqo la qabto ta ugu adag xataa wuxuu ka dhib badan tahay ugaadhsiga Yaxaaska waaweyn” Waxa diyaariyey Liibaan Cabdulqaadir Qofka banii’aadamka ahi wuxuu u baahan yahay inuu marar badan dibbeda iskaga soo saaro oo uu iska faaruqiyo waxyaabo badan oo maskaxdiisa mashquulisay si caqligiisu uu u qaato neefsi ku filan oo nasasho iyo fikir dambe ku abaabuli kara. Dibna iskugu habayn kara inuu jaleeco waxyaabo badan oo aan wali arag amma akhriyin. Markuu qofku is yidhaahdo tallaabdan qaad waxa soo shaac baxda inaanu marar badan awood u yeelan inuu si quman u tuujiyo fikirkii uu niyada ku …
Malaayiin qof adduunka ayaa u dhinta sanad walba Cancer laga hortagi karo oo lagu daawayn karo radiotherapy, sida ay sheegeen dhaqaatiirta. Tiro cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in tobankii qofba sagaal kamid ah wadamadda saboolka ah aysan heli karin radiotherapy. Xitaa wadamadda lacagta leh oo ay adeegyada ay ka jiraan, ayaa xeeldheerayaasha ay ka digayaan inay jirto qalab yari iyo shaqaale tababaran. Ilaa 60% bukaanka Cancerka ayaa u baahan radiotherapy waqtiga daawayntooda. Waa daawo muhiim u ah dadka Cancerka qaba, oo ay ku jiraan Cancerka naasaha iyo xubnaha taranka ee raga. Si kastaba ha ahaatee, waddammada dakhligoodu uu hooseeyo helitaanku waa uu …
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ Assalamu Calaykum Ilaahay waa illaaha awooda badan ee abuuray dunidaan aan ku noolnahay. Ilaahey wuxuu abuuray cirka, dhulka, qoraxda, xidigaha, dayaxa iyo wax walba oo noole ah. ilaahey waa abuuraha abuuray dunidaan iyo wax walba. Ilaahey wuxuu siiyay dadka caqli oo ay ku fakaraan oo ay wax ku kala gartaan. ilaahey wax ka caqli badan ma jiro. Dunida waxaa ka jira diimo badan. In kastoo diimaha dunida ay aad u badan yihiin, Diimaha ugu caansan aduunka waxay ka yimaadeen qaaradda Aasiya. Diimahaan ugu caansan waxay kala yihiin Kirishtaan, Yahuun, Islaam, Buddhism, Shikhism, iyo Hinduism. Qofkii rumeysan diin ka …